Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Ny 60%-n'ny Amerikanina dia mety tsy handeha mandritra ny fialantsasatra
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
.60% amin'ny Amerikanina no tsy mety mandeha mandritra ny fialantsasatra.
Ny fanadihadiana dia nahatsikaritra fa ny 29% amin'ny Amerikanina dia mety handeha amin'ny Thanksgiving ary ny 33% dia mety handeha amin'ny Krismasy - fitomboana avy amin'ny 21% sy 24%, raha oharina amin'ny 2020. Ireo izay mikasa ny handeha mandritra ny fialantsasatra dia manantena mitondra fiara, fa ny fiakaran'ny vidin'ny entona dia mety hampihena ireo drafitra ireo.
Amerikanina iray amin'ny telo ihany no mikasa ny handeha amin'ny Krismasy, ary vitsy kokoa aza ny mikasa ny handeha amin'ny Thanksgiving.
Ny 68% amin'ireo mpandeha amin'ny Thanksgiving dia mikasa ny hijanona miaraka amin'ny fianakaviana na namana, raha ny 22% kosa dia mikasa ny hijanona ao amin'ny hotely.
Ny 66% amin'ireo mpandeha Krismasy dia mikasa ny hijanona miaraka amin'ny fianakaviana na namana, raha 23% kosa no mikasa ny hijanona ao amin'ny hotely.
Na dia mampitombo ny haavon'ny fampiononana ho an'ny mpandeha aza ny fiakaran'ny tahan'ny vaksiny amin'ny COVID-19, ny ankamaroan'ny Amerikanina dia mbola misafidy ny hijanona ao an-trano amin'ity fotoam-pialan-tsasatra ity, araka ny fanadihadiana nasionaly vaovao nataon'ny Fikambanan'ny hotely sy hotely amerikanina (AHLA).
Ny fanadihadiana dia nahatsikaritra fa ny 29% amin'ny Amerikanina no mety Travel ho an'ny Thanksgiving ary 33% no mety handeha amin'ny Krismasy — fitomboana avy amin'ny 21% sy 24%, tsirairay avy, raha oharina amin'ny 2020. Ireo izay mikasa ny handeha mandritra ny fialan-tsasatra dia manantena ny hitondra fiara, fa ny fiakaran'ny vidin'ny entona dia mety hampihena ireo drafitra ireo.
Ny fanadihadiana natao tamin'ny olon-dehibe 2,200 dia natao ny 30 Oktobra - 1 Novambra 2021, nataon'ny Morning Consult tamin'ny anaran'ny AHLA. Ny zava-dehibe dia ahitana ireto manaraka ireto:
Ny Amerikanina iray amin'ny telo ihany no mikasa ny handeha amin'ny Krismasy (33% no mety handeha, 59% tsy azo inoana), ary na dia vitsy kokoa aza ny mikasa ny handeha amin'ny Thanksgiving (29% angamba, 61% tsy azo inoana).
Ny 52% amin'ny Amerikana dia milaza fa mikasa ny hanao dia kely kokoa izy ireo ary 53% mikasa ny hanao dia fohy kokoa noho ny fiakaran'ny vidin'ny entona.
Ny mpanao fialam-boly dia manao fanitsiana maromaro amin'ny drafitry ny diany mifototra amin'ny toetry ny areti-mifindra ankehitriny, ao anatin'izany ny fandehanana ao anatin'ny halaviran-dalana (58%), ny fandehanana kely kokoa (48%) ary ny fanaovana dia fohy kokoa (46%).
Amin'ireo ray aman-dreny manan-janaka latsaky ny 12 taona, 41% no milaza fa ny fisian'ny vaksiny ho an'ny ankizy 5-11 taona dia hahatonga azy ireo ho mora kokoa ny handeha.
Ny 68% amin'ireo mpandeha amin'ny Thanksgiving sy 64% amin'ireo mpandeha Krismasy dia mikasa ny hitondra fiara, raha ampitahaina amin'ny 11% sy 14%, izay mikasa ny hanidina.
Na dia nanampy ireo mpandeha aza ny vaksiny hahatsapa ho mahazo aina kokoa, ny fiakaran'ny vidin'ny entona sy ny fitohizan'ny ahiahy momba ny areti-mifindra dia mahatonga ny Amerikana maro hisalasala handeha mandritra ny fialantsasatra. Na eo aza ny fisondrotana kely amin'ny fitsangatsanganana fialantsasatra amin'ity taona ity, ny hotely dia mbola hiatrika fianjerana ara-toekarena avy amin'ny areti-mifindra, manasongadina ny filana fanamaivanana federaly lasibatra, toy ny Save Hotel Jobs Act, hanohanana ny indostria sy ny mpiasa ao aminy mandra-piveriny tanteraka.
Na dia eo aza ny isan'ny voa mafy indrindra, ny trano fandraisam-bahiny no hany ampahany amin'ny indostrian'ny fampiantranoana sy ny fialam-boly mbola tsy nahazo fanampiana mivantana avy amin'ny Kongresy.